Izwe phansi yilapho Redroo, i slot inthanethi kusekelwe. Lo mdlalo ine indaba ephathwayo isilwane, futhi ezinye engcono Slots mobile emhlabeni efanayo indaba ephathwayo. Zibonisa ukuzidela umlingisi lomcoka, okuyinto yikhangaru ehlane lase-Australia. Qhubeka ufunde ukuze uthole ulwazi okunothando okwengeziwe ngale slot.
Ukwazi Okwengeziwe Lokhu Kuhle Slots Hambayo
Lokhu slot has 5 reels, 4 imigqa 1024 izindlela to win. Ngemuva siqukethe Sunset ukuthi eshiya onsomi kwenkundla anemibala. Isizinda sihlanganisa semi eyomile Australian landscape. Kulesi game, ungakwazi ukuthola imali uma ukufanisa imifanekiso ezifanayo, kunoma iyiphi esondweni eduze kusukela ohlangothini lwesobunxele.
It has ephezulu ukubaluleka izimpawu aqukethe inja ephethe induku emlonyeni waso, pair of cockatoos pink anemibala, abenza kwi surfboard kanye bikini abagqoke lady. Low-value izimpawu zihlanganisa indinganiso imifanekiso ukudlala ikhadi ka, J, K, Q, 9 futhi 10.
Ohlangothini Wild With The Best Imfono-mfono Slots Game
Redroo Ubuye uphawu Wild njengawo iningi okungcono Slots mobile etholakalayo. Isithonjana zasendle ufanekiselwa i Uluru noma Ayers Rock. I zasendle kungabonwa phezu itolitji 2, 3 kanye ne 4. Lolu phawu shintsha zonke ezinye isithonjana, ukuze ukukusiza kokwehla onqobayo.
Uphawu kuphela ukuthi zasendle Ayers Rock abakwazi esikhundleni phezu itolitji yilona Australian Map chitha isithonjana. Lolu phawu kuzosiza isebenze base game ibhonasi sici. Lesi sici ibhonasi esiyindilinga Mahhala osebenzisa njengoba kuchazwe ngezansi.
IFree osebenzisa Ibhonasi Isici
Nge ingqikithi ehlukileko esekelwe kwezinhlobo zezinyoni ezingavamile amahhashi, le foni Slots yokukhokha yeselula nakanjani kukwenza ethe njo kwikhompyutha yakho noma mobile Ngokuphazima kweso. Lokho ngezizathu kwesokudla; ngokuwina ezinye imivuzo okuthakazelisayo.
Ungase futhi uthole multipliers okuthakazelisayo khulula osebenzisa round. Nge isithonjana zasendle kunoma iyiphi itolitji 2, 3 futhi 4 okuholela kokuwina, niyozuza a 2x noma 3x Okuphindaphinda. Ngu kokufika izimpawu okungenani ezimbili zasendle eziholela kokuwina, ungakwazi ukuthola njengoba eliphezulu 27x inkokhelo yakho. Uma ufika imifanekiso emibili scatter kule khulula spin round, uzothola i eyengeziwe osebenzisa five khulula njengoba umvuzo
Lona omunye the best Slots yeselula nge Gameplay omkhulu, ihluzo lihlale izithombe. I ingoma kuba ngempela cool futhi efanelekayo lo mdlalo indaba ephathwayo. Iqukethe RTP njengoba eliphezulu 95.30%, okusho ukuthi nge Ukubheja of £ 100 ngeke uhola imali ye £ 95,30.